आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त भए, तर अस्थायी
काठमाडौं, साउन ९ (सेतोपाटी)
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले ११ औं अनसन सुरु गरेकै दिन सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आठ महिनादेखि रिक्त चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा क्याम्पस प्रमुख तथा सहायक डिन नियुक्ति गरेको छ।
त्रिवि कार्यकारी परिषदले डा. प्रताप नारायणलाई क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरेको हो। त्यस्तै, डा. राजेन्द्र गुरागाईं, डा. मधु देवकोटा, डा. द्वारिकाप्रसाद श्रेष्ठ र मन्दिरा शाहीलाई सहायक डिन नियुक्त गरिएको छ।
यसअघि गत मंसिरमा केसी दसौंपटक सत्याग्रह बस्दा त्रिविले डा. जगदीश अग्रवाललाई आइओएम डिन नियुक्त गरेको थियो। अन्य पदाधिकारी यथाशीघ्र नियुक्ति गर्ने भनिए पनि हालसम्म प्रक्रिया अवरुद्ध रहँदै आएको थियो। त्रिविले केसी अनसन सुरु हुने दिन पारेर यी नियुक्ति गरे पनि यो पूर्णकालीन भने छैन।
क्याम्पस प्रमुखका रुपमा डा. पाठकलाई पूर्ण कार्यकालको निम्ति नियुक्ति दिइएको छ। सहायक डिनका हकमा भने 'अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि' भनिएको छ। जबकि सहायक डिनको पदावधि चार वर्षको हुन्छ।
केसीले आफ्ना सात बुँदे मागमा आठ महिनादेखि आइओएम पदाधिकारी नियुक्ति नगरेको उल्लेख गर्दै तुरुन्तै सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको माग गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ९, २०७४, ०७:५६:४५